Mogadishu Journal » Axmed Madoobe ” Muqdisho waxaan u nimid in la laabo boggii khilaafka Jubbooyinka
Mjournal : — Waxaa maanta siweyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, wafdi uu hogaaminayay hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Madoobe oo mudo dhowr sano ah kadib maanta gaaray magaalada Muqdisho.
Axmed Madoobe oo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho si heer sare ah loogu soo dhaweeyay ayaa isaga oo warbaahinta kula hadllayay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa uu sheegay ama ka warbixiyay safarka ay Muqdisho ku soo gaareen.
“Muqdisho waxaan u imid dhameystirka heshiiskii Addis Abab iyo sidoo kale laabista buuggii Jubbooyinka ee Muqdisho ka furanaa. Waayo heshiis ayaa la gaaray, halkanna socodkeennu wuu ku badnaan doonaa,” ayuu yiri Sheekh Axmed Madoobe warbaahinta ugu sheegay garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale yiri” Ujeedada socdaalkeena Muqdisho sidoo kale waxaa uu saleysan yahay sidii aan u laabi laheyn booggii khilaafka Jubbooyinka ee ragaadiyay shaqdii dowladda, annagana dhib weyn nagu ahaa,” ayuu yiri Axmed Madoobe.
C/kariin Xusseen Guulleed wasiirrka arrimaha gudaha dowladda federaalka oo ka mid ahaa xubnihii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Sheekh Axmed Madoobe iyo wafdigiisa, ayaa sheegay in ay siweyn ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta wafdiga maamulka Jubba ee uu hogaaminayo Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe iyo wafdiga la socda ayaa la filayaa in ay wada hadallo yeeshaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud, lamana oga inta ay qaadan doonto booqashada wafdiga Jubba ee magaalada Muqdisho.